Andraikitry ny Famerenana amin'ny laoniny | Reef Resilience
Ny fitehirizana ny haran-dranomasina dia hitaky fomba maro samihafa izay manomboka amin'ny hetsika eo an-toerana ka hatramin'ny sehatra manerantany. Maneran-tany dia mila mampihena be ny fampiasana angovo isika, mifamadika amin'ny loharanon-kery azo havaozina, ary mitahiry ny tontolo iainana mitroka karbonika (ala, honko ary honko). Eo an-toerana dia mila mitantana ny fandrahonana toy ny fanjonoana tafahoatra sy ny fandotoana isika, ary miaraka amin'izay dia mamerina ny haran-dranomasina kendrena amin'ireo mponina azo resahina, misy karazany maro karazana ary azo averina amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fitsabahan'ny ekolojika vaovao.
Ny fihetsika mivantana sy mahery setra hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro, raha toa ka tena manakiana, dia ampahany amin'ny fivoahana lehibe kokoa amin'ny fiantohana ny hoavin'ny haran-dranomasina sy ny tolotra ara-tontolo iainana sy ara-toekarena omen'izy ireo. Ny karba efa navotsotra tany anatin'io rivotra io dia mbola hanohy ny ranomasimbe aty amin'ny rano tsy hay tohaina amin'ny haran-dranomasina mandritra ny am-polo taona ho avy. Mitombo ny fivalozana mifandraika amin'ny tsy fahombiazan'ny fiterahana, vokatry ny tranga isan-karazany, anisan'izany ny fampihenana ny habetsaky ny mponina sy ny haavony, mametraka ny sehatra ho an'ny fatiantoka ara-tontolo iainana. Raha toa ka mitahiry ny tontolom-pahaizana ara-tontolo iainana sy ara-toekarena izay manoloana ny haran-dranomasina amin'izao fotoana izao dia ilaina ny mividy fotoana sy mampitombo ny faharetan'ny ecosystem amin'ny fe-potoana fohy.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina dia afaka manampy amin'ny faharetan'ny elanelana misy eo anelanelan'ny ankehitriny rehefa misy andian-jiolahim-borona efa simba, ary ranomasimbe hoavy azo antoka ho an'ny coral. Ny asa amin'izao fotoana izao dia maneho fa azo atao ny famerenana ny vatohara, ary mihamitombo hatrany ny haben'ny fahombiazan'ny fahombiazana. Amin'ny hoavy, amin'ny alàlan'ny fampiasana fikarohana manandanja momba ny paikady momba ny tontolo iainana sy ny herisetra amin'ny ankapobeny, dia mety hiorina kokoa ny vatohara tafaverina. Ny fiasana hanakatona ny elanelana misy eo amin'ny sehatra eo an-toerana sy ny fiantraikany eo amin'ny sehatry ny ecosystem dia tsy mora na haingana, fa ny tanjona ankehitriny sy ny làlam-pivoaran'ny fiaraha-monina amin'ny fambolena harena.